3.5W9V Predictive Panel Folding Small Panel China Emeputa
Nkọwa:3.5W9V Panelite Ngwá Ọrụ,Ngwongwo Ndaghari N'uzo,Obere Igwe Mmiri nke Na-acha Nchara Igwe
3.5W9V Panelite Ngwá Ọrụ,Ngwongwo Ndaghari N'uzo,Obere Igwe Mmiri nke Na-acha Nchara Igwe
Home > Ngwaahịa > Ngwa igwe na panel > Ogige igwe na-agbanwe agbanwe > 3.5W9V Predictive Panel Folding Small Panel
Ubu oke: 30000pcs/month
Ụdị Ụgwọ: L/C,T/T,Paypal,Western Union
A na-eji obere ogho ndị dị na windo rụọ ọrụ iji fanye mgbe ha na-egwu egwu. Igwe na-arụ ọrụ dị iche iche nke na-arụ ọrụ na mbara igwe na-enyefe ndị ọzọ nwere ike inyere ndị ahịa di iche iche aka. Anyị nwere ike ịmepụta Mee N'onwe Gị n'ụdị dịka ndị ahịa chọrọ.
Ngwaahịa anyị bara uru: 1. Nkịtị dị elu nke laminate na-acha uhie uhie na-akwalite ngwugwu nchebe dị elu: elu elu, mmachi nke ultraviolet, ọdịdị dị mma nke nchekwa plastik, nke nwere ndụ nke afọ 5-10.
2. Ihe mgbawa ahụ nwere ike ịnweta ọtụtụ mkpụrụ ndụ ndị dị na kristallic crystalline, na-arụ ọrụ ntụgharị dị elu, ebe dị mma na-adịghị ike na mmepụta arụmọrụ. Monocrystalline silicon ntọghata ọnụego ruo 20%, polycrystalline silicon ntọghata ọnụego ka 17.4%
3. Kwadebere ya na iko isi mmiri nke DC. Ngwá ngwungwu ngwongwo nke ngwangwa: ọdabara na ọnọdụ dịgasị iche iche, mmiri na-adịghị asọ oyi, na-eguzogide, nrụgide na-eguzogide ọgwụ ma na-eguzogide eguzogide, na-eguzogide mmanụ, ike acid na alkali na-eguzogide ọgwụ, na-eguzogide ọgwụ dị elu na ndị na-abụghị ntụpọ.
Usoro ntinye elu, nke na-emepụta mkpụrụ ego 50,000 kwa ụbọchị, nwere ike ikwenye n'ụzọ zuru ezu na e nyere ndị ahịa ihe
Ngwaahịa : Ngwa igwe na panel > Ogige igwe na-agbanwe agbanwe
Ngwongwo Ndaghari N&#39;uzo